Somaliland oo Odayaal kasoo jeeda Galmudug ku wareejisay Dhalinyaro ku xirneyd Hargeyso:(Sawiro) – Hareerley News
Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa xalay Xarunta Madaxyooyada ee Magaalada Hargeysa ku qaabilay madax-dhaqameed uu hoggaaminayo guddoomiyaha dhaqanka ee beelaha Hawiye, Mudane Maxamed Xasan Xaad.
Kulankan uu madaxweynuhu la qaatay madax-dhaqameedka ka socda beelaha Hawiye oo ka qabsoomay xalay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland, ayey bahda dhaqanku madaxweynaha ugaga mahad celiyeen cafiska uu u fidiyey 19 maxbuus oo burcad-badeednimo u xirnaa, kuwaas oo laga soo wareejiyey dalka Seychelles, islamarkaana uu madaxweynuhu dhawaan cafis u fidiyey.
Madaxda dhaqanka ee beelaha Hawiye, ayaa maantaba kasoo ,ambaxay Magalada Hargeysa, iyaga oo hoggaaminaya 19-kii maxbuus ee uu madaxweynuhu cafiska kusii daayey, kuwaas oo muddo 9 (sagaal) sanno ah ku xirnaa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, waxana sii sagootiyey la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhallinyarada, Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan. Kulanka xalay waxa madaxweynaha ku wehelinayeen masuuliyiin isugu jiray wasiiro, taliyeyaal iyo xeer ilaaliyaha qaranka.
Horjoogaha Dowlad Goboleedka k/Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis LaftaGareen Oo shir Guddoomiyay kulanka khamiislaha Ee Golaha Wasiirrada:-(Sawiro)
Kulanka oo looga hadlay Arimaha Ammaanka, dhaqaalaha, siyaasada ,Shaqalaysiinta Bulshada Reer Koonfur Galbeed iyo qodobbo kale, ayaa waxaa warbixinno looga dhagaystay qaar ka mid ah Wasiirrada Maamulkaasi K/Galbeed waxana ay sheegeen in ay howluhu u socdaan sidii loogu tala galay. Isaaq Cali Subag, Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka K/Galbeed ayaa laga dhegeystay warbixin ku Saabsan nabad […]
Jasiiradda Trump ku tiri “annagu iib ma nihin”
Mas’uuliyiinta jasiiradda Greenland ayaa sheegay “inaysan iib ahayn” ka dib markii uu dhawaan madaxweyne Donald Trump sheegay in uu jeclaan lahaa in Mareykanku uu iibsado Jasiiraddaas oo ah tan ugu weyn caalamka. Green Land , oo dhul ahaan uu u leeyahay waddanka Denmark, ayaa ku taalla inta u dhaxeysa Waqooyiga badweynta Atlantic iyo Arctic. Waxaa […]
Shir deg deg ah oo la isugu yeeray Xamlooyinka u adeega Xujeyda:-(Sawiro)
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Guddi u saaray furitaanka Wadooyinka xiran.
Posted on September 12, 2019 September 12, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)